Sida loo sameeyo waqti-dhaaf ah | Hal-abuurka Online
Sidee loo sameeyaa waqti-dhaafid
Maya Waxaan ku leeyahay nADA nuevo si te qodo in inta badan mobilada de ka últimos años ya tsidaen Awoodda lagu duubo fiidiyowga shaashadda buuxda ama habka duubista joogtada ah. Si lo haces en qaabkan u dambeeya, el qalab va cuskatoiyo el video dembi byar, joojinante el tiempo in marwaa maxay. Así in, al final del da, tsidaes un vídeo de unas yasidas en el in apwaacen ilaados ka MOVimIentos del módoono.
Way fududahay, laakiin waxa laga yaabaa in waxa aad raadinayso ay yihiin natiijooyin xirfad leh. Xiga Waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo waqti-dhaaf ah oo leh qalab kala duwan.
1 Waa maxay waqti lumis?
2 Sidee loo sameeyaa waqti-dhaaf ah?
3 Qalabka bilaashka ah
3.1 Aaladda Waqti-Dhama
3.4 Duub Virtual
¿Qué es un waqti-lapse?
Un waqti-lapse (tiempo kicino) es una farsamo ka kooban duubista ficil leh waqti aad u gaaban. waaa kuqoranion, a su vez, se proyca a una soo geloctay muy kicina iligro del video. De waaa laberey, se pude Ver un promarkaaso muy ráptagay como si fuerey xad dhaaf ahadaammine kicino.
Es la opcion kaamil aha waayo, hacer vídeos de animales in se mueyimaado a una soo geloctay hoosea, como ka cayayaankaos o ka mamíbirtaos peinños. El natiijadabuuqaysaan final es baastante weydiiprendkorotada ya in una Ficilka caadi ahaan socon doona daqiiqadaha waxaa lagu arki karaa dhowr ilbiriqsi gudahood.
Sidee loo sameeyaa waqti-dhaaf ah?
Haddii aadan haysan kamarad xirfad leh, ha werwerin, maalmahan, telefoonada intooda badan waxay ku daraan ikhtiyaarka waqti-dhaafka ah. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa fur kamaradda taleefankaaga oo raadi ikhtiyaarka waqti-dhaafka ah, marka aad hesho, kaliya waxaad u baahan doontaa inaad taleefanka uga tagto meel go'an., oo si fiican loogu taageeray shay ama saddex-geesood. Taa lidkeeda, haddii taleefankaagu aanu haysan ikhtiyaarkan, waxaad soo dejisan kartaa codsiyada soo socda:
LasocoCodsigan waxaad ku beddeli kartaa cabbirrada. Sida, tusaale ahaan, muddada u dhaxaysa. Waxaa loo heli karaa Android iyo iOS labadaba.
Hoos u dhac: Codsigan, marka hore waa inaad duubtaa muuqaal caadi ah ka dibna aad soo geliso. Waxa kaliya oo aad u baahan doontaa in aad habayso xawaaraha aad rabto in wakhtigaagu uu ahaado.
Qaab-dhismeedka: Codsigan waxa uu leeyahay nooc bilaash ah oo lacag ah. Marka ugu horeysa waxaad wax ka beddeli kartaa waqtiga dhiman, adoo ku daraya dhalaal, isbarbardhig ama filtarrada.
Si aad waqti-ku-dhaaf u qaadato kamarad, waxaad u baahan tahay oo keliya saacad-hayaha. Haddii ay taasi ku guuldareysato, tripod si sawirku u soo baxo sida ugu macquulsan. Inkasta oo aad ku taageerto meel kasta ay sidoo kale ku caawin doonto. Si loo habeeyo kamarada waxa fiican in la doorto qaabka gacanta M, maadaama ay kuu ogolaanayso inaad doorato xawaaraha daloolinta iyo daloolinta diaphragm.
Qiimaha aad siiso wakhtiga u dhexeeya sawiradaada ayaa ka dhigi doona faraqa u dhexeeya wakhtiga wanaagsan iyo midka caadiga ah. La mid ma aha in aad rabto in aad qabato dhaqdhaqaaqa geedaha sida baabuurta. Iyadoo ku xiran haddii kamaradaadu tahay Canon ama Nikon, Nikon uma baahnid saacadeeyaha, sababtoo ah goobaha menu-ka waxaad bedeli kartaa wakhtiga u dhexeeya sawir kasta. Dhanka kale, Canon, waa inaad hagaajisaa waqtiga iyo soo-gaadhista.
Waxa kale oo jira doorasho kale sida Gopro-ka oo ku dara doorashada waqti-dhaafka.
Time-Lmalax Tool es una qalab kuu ogolaanaya inaad qaado isku xigxiga sawiro waqti go'an, y a joogto ahacion kareemadaar un video in muwaara la abysidaCIA de la secuxanjo de imágenes, waao waayo, la gkorotada in maya tenga la habiltay de kabtanurar una secuxanjo de fotogRAFías. Waxa kale oo aad kala dooran kartaa filtarrada kala duwan, beddelka sawiradaada, beddelka iftiinka, iyo kuwo kale.
Xigasho: Laga soo bilaabo Linux
FFmpeg waa a Qalab il furan oo loogu beddelo faylalka maqalka iyo muuqaalka ah. Qalabkani wuxuu leeyahay API bilaash ah, waxaana laga heli karaa meelo badan. Waxa kale oo aad duubi kartaa, bedeli kartaa oo aad gudbin kartaa maqal iyo muuqaal.
Waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaarka ah inaad abuurto waqti-dhaaf ah.
sameeAVI es una iyadawanIenta muy inási ay u waayo, la la sheekaystoion de vídeo. Iyada oo loo marayo sawirro taxane ah oo hore loo duubay, waxaad ku dhejin kartaa arjigan si aad u abuurto wakhti adiga kuu gaar ah. Waxaad ku hagaajin kartaa heerka jir sida aad jeceshahay.
Virtual Dub es un barnaamija bilaashabaxao y de cóqodo abikhaldan waayo, la edhalkanon de señales de vídeo (múltipls formatos incluydhammaad AVI, MPEG, QuickTime, y WMV) y audio (PCM, MPEG, MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, iwm.) en Windows. Lo in lo hxiddiga tan especiil es in, mace in un sariirtaqurxinta de pelíjeexdayas, es una iyadawanIenta de edhalkanon de vídeo y audio profesilbaxnimo, con una interface de usuario muy INTbaxaiva.
Sida MakeAVI, waxaad bedeli kartaa heerka jir. Codsigan wuxuu leeyahay filtarrada, iyo doorashooyin kala duwan sida beddelka cabbirka fiidiyowyadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sidee loo sameeyaa waqti-dhaafid
Sida loo sameeyo collage sawiro leh